नेपालमा मेडिकल शिक्षाको सुरुवात कसरी भयो? डा हेमाङ्गमणि दीक्षितसँग भिडियो वार्ता :: स्वास्थ्य खबरपत्रिका
नेपालमा मेडिकल शिक्षाको सुरुवात कसरी भयो? डा हेमाङ्गमणि दीक्षितसँग भिडियो वार्ता
रिता लम्साल बुधबार, चैत ११, २०७७, १३:४५:००
काठमाडौं– नेपालमा चिकित्सा शिक्षाको सुरुवात भएको धेरै समय भएको छैन। चार दशक अघि चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम)को सुरुवात गर्नेदेखि लिएर चिकित्सा शिक्षाको पाठ्यक्रम बनाउनेसम्मको महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने व्यक्तिमध्येका एक हुन् डा हेमाङ्गमणि दीक्षित।
सरकारीदेखि निजीस्तरमा खुलेका मेडिकल कलेजहरुको गुणस्तर सुधारमा समेत उहाँको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ। आइओएमका पूर्व डिन डाक्टर दीक्षित तथा उक्त समयका उनका सहकर्मीहरुकै योगदानका कारण नेपालमा चिकित्सा शिक्षाको यात्रा अगाडि बढेको हो।
नेपालमा अस्पताल खुल्न थाल्दाको सुरुवाती अवस्थामा डाक्टरले बिरामीको उपचार गर्नुलाई धार्मिक कार्यको रुपमा लिने गरेको र बिरामीले पनि डाक्टरलाई भगवानको उपमा दिने गरेको डा दीक्षितको भनाइ छ।
उनका अनुसार करिव ६ दशक अघिको समयमा नेपालमा मेडिकल शिक्षाको सुरुवात नभएपनि सरकारले नै विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिमा विदेशमा डाक्टरी पढाउन पठाउथ्यो।
सरकारले पढाउन पठाएका विद्यार्थीहरु अध्ययन पुरा गरी डाक्टर बनेर नेपाल फर्किन्थें र नेपाली बिरामीहरुको उपचार गर्ने गर्थे। त्यतिबेला उत्पादन भएका चिकित्सा तर्फका जनशक्तिले पढाइमा आफैंले खर्च गर्न नपर्ने भएकाले पनि चिकित्सा पेसालाई सेवामुलक पेसाको रुपमा परिचित थियो।
तर, अहिले चिकित्सा शास्त्र अध्ययन गर्न छात्रवृत्तिमा मात्र नभइ शुल्क तिरेर पढ्नुपर्ने अवस्था भएको र मेडिकल शिक्षाको शुल्क पनि बढ्दै गएकाले डाक्टरहरुमा पनि पढाइमा खर्च गरेको शुल्क कमाउनुपर्छ भन्ने भावना देखिएको उनले बताए। समयसँगै मेडिकल क्षेत्रको दायरा बढ्दै गएको र निजी क्षेत्रमा पनि मेडिकल कलेज तथा अस्पतालहरु संचालन हुन थालेपछि चिकित्सा सेवा सेवामुलक पेसासँगै केही व्यापारीकरणतर्फ पनि मोडिएको डा दीक्षितको तर्क छ।
नेपालमा बिरामीको चाप अनुसार अझै पनि डाक्टरहरु अभाव भएको उनको भनाइ छ।
धेरै बिरामी र कम डाक्टर हुँदा बिरामीलाई डाक्टरले धेरै समय परामर्श दिन सक्ने अवस्था नभएको उनले बताए। नेपालको मेडिकल शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको क्षेत्रमा अझै धेरै सुधार र परिमार्जन गर्दै लैजानुपर्ने विषयहरु भएको डा दीक्षितको भनाइ छ।
डा दीक्षितले सरकारले स्वास्थ्य सेवालाई नागरिकको मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था गरिएपनि स्वास्थ्यको बजेट भने कम विनियोजन हुने गरेको बताए।
उनले चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्र तथा स्वास्थ्य सेवालाई गुणस्तरिय र सर्वसुलभ बनाउन स्वास्थ्यको बजेट १२ प्रतिशत बनाउनुपर्ने धारणा समेत राखे।
डा दीक्षितसँग हामीले नेपालमा मेडिकल शिक्षा र अस्पताल संचालन तथा विकासक्रम कसरी भयो? आइओएमको स्थापनाको इतिहास के छ? पहिलाको तुलनामा अहिलेको मेडिकल शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाको अवस्था कस्तो छ? लगायत मेडिकल शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा देखिएका समस्या र ती समस्या समाधान कसरी गर्ने भन्ने विषयमा कुराकानी गरेका छौं।
प्रस्तुत छ डा दीक्षितसँग गरिएको भिडियो कुराकानीको सम्पादित अंशः
शनिबार काठमाडौंमा ४६ हजारले लगाए भेरोसेल खोपको पहिलो मात्रा १६ मिनेट पहिले